इन्टरनेटमा भाइरल भएकी युवतीका २५ लोभदाग्दा तस्विर - Muldhar Post
पत्रपत्रिकाबाट २०७६, २८ भाद्र शनिबार 5943 पटक हेरिएको
इन्टरनेटमा भाइरल भएकी यी युवती को हुन् भन्ने बिसयमा सबै को मन मा खुल्दुली आउन सक्छ ! पछिल्लो समय बिसेष गरि सामाजिक संजाल फेसबुक टुइटर हरु मा यिनको प्रोफाइल फोटो हरु हामि धेरै नै देख्न सक्छौ । तर यी नेपाली भने होइनन् ।
अझ यिनको फोटो प्रयोग गरेर अरु नै लेडिज को नाम मा फेसबुक आइडी हरु खोलेर नेपालि हरु लाइ झुक्काउने हरु को पनि कमि छैन ! देख्दा उस्तै नेपालि जस्तै देखिने यी युवती म्यान्मार कि हुन् यिनको नाम मेपन्चि हो तर यिनको बास्विक नाम भने मे पन्चि सो नायुङ हो । उनको बाबा ले सानो मै उनको नाम परिवर्तन गरेर मेपन्चिमात्र राखे जस्को वास्तविक अर्थ मिस पेन्टर हो ।
मेपन्चिको वास्तविक नाम भने मे पन्चि सो नायुङ हो । उनको बुवा उ सो नायुङले मेपन्चिको नाम परिवर्तन गर्दै मेपन्चिमात्र राखे जस्तो वास्तविक अर्थ मिस पेन्टर हो । युवा अवस्थामा सबैले आफ्नो जिवनको भविष्य र एउटा बोकेका हुन्छन् । कसैले सपना पुरा गर्छन् त कोहि सपना पुरा गर्न चुक्छन् । मेपन्चिको सपना भने कलाकार र पेन्टर बन्नु थियो । त्यसैले उनका बुवाले उनको नाम परिवर्तन गरेका थिए । मेपन्चि पेन्टर पनि हुन् । उनले कमेडि फिल्ममा अभिनय समेत गरेकि छिन् । उनी एक असफल गायिका पनि हुन् । हेर्नुहोस उनका केहि भाइरल तस्बिर हरु ।